Fampihorohoroana sy fanafihana mitam-piadiana: saron’ny zandary ry Benja sy ny ekipany | NewsMada
Ny “Opération Mandio” no nifarana, fa mitohy kosa ny ady amin’ny asan-jiolahy mahery vaika ao Toamasina. Voasambotry ny zandary, ny alarobia teo, araka izany, ny lehiben’ny andian-jiolahy mpanao fanafihana mitam-piadiana sy ny ekipany. Mitohy ny fikarohana ny naman’izy ireo hafa.
Taorian’ny fampihorohoroana sy fandrobana ary fanafihana mitam-piadiana nataona andian-jiolahy tany amin’ny kaominina ambanivohitra telo , Anjahamany, Ambalarondra, Andranombolaha ary hatrany amin’ny fokontanin’ Ampasimadinika lalam-pirenena faharoa, voasambotry ny zandary ry Benja kely sy ny ekipany izay mbola niafina tany anaty ala.
“Taorian’ny loharanom-baovao azo tamin’ny famotorana, nisy fidinan’ny zandary fanindroany tany ambanivohitra hatramin’ny alarobia teo. Nahita irika ny zandary, noho izany ary fantatra fa misy ny mbola niafina tany anaty ala. Tao kosa ireo efa nody tany Toamasina ary tany amin’ny fokontany Ambalakisoa, Tanambao verreri, Morarano nahatrarana azy.”, hoy ny fanazavana.
Tsy mora ny fanenjehana satria nandositra tany amin’ny lakandranon’ i pangalanina ireo jiolahy. “Tsy nikely soroka kanefa ny zandary ka tratra ihany ireo efa-dahy tena nanatanteraka ny fanafihana, tahaka an-dry Robert 28 taona, Benja kely 28 taona. Ity farany izay lehibe lefitr’ i Josepha mbola karohina. Marcellin 35 taona, Ranjaonarivelo 22
taona ary ireo vehivavy roa mpanatitra sakafon’ izy ireo mandritra ny fiafenana anaty ala, Rosah 16 ary Ihomby 18 taona”, hoy ny kolonely kaomandin’ny vondrotombim-pileovan’ny
zandarimariam-pirenena atsinanana, Ranaivoarison Théodule, nandritra ny valandresaka ho an’ny mpanao gazety omaly.
Mahatratra 9 mianandahy ireo voasambotra ka telo any amin’ny polisy raha enina kosa ao amin’ny zandary.
Raha ho an’ i Josepha manokana, tamin’ny alalan’ny findan’ ireto voasambotra ireto no nahalalana ny miafina rehetra. Hita tao avokoa ny soratra maro sosona nifandraisana tamin’ ireo roa vavy mpanatitra sakafo sy fifandraisana tamin’ i Josepha maniraka miafina. Hita tamin’ ity finday ity ihany koa ny fitantaran’ i Josepha ny fanafihana efa nataony tany Mananara avaratra.
Mampitandrina ny kolonely, Ranaivoarison Théodule
“Mampitandrina izahay fa tsy natao ho haingan-tanana fotsiny io basy entinay io ary efa nomen’ny lalana velona eto amin’ny tany sy ny firenena ary ny fitondram-panjakana misy fa azonay atao tsara ny mampiasa azy io amin’ny olona minia tsy hampandry fahalemana ny tanana sy ny fiaraha-monina. Tsy hikely soroka amin’ izay minia hanakorotana ny tenanay”, hoy hatrany ny kaomadin’ny vondrotom-paritry ny zandarimariam-pirenena atsinanana ny kolonely, Ranaivoarison Théodule. Nohatreterina hatrany fa ny “operation Mandio” niraisan’ny zandary nanerana ny Nosy no nifarana fa hitohy amin’ny operation eny andalama-pasika ny zandary ka manafatrafatra ny sefo fokontany mba hametraka tsara ny fiaraha-miasa.
Tsy handefitra sy tsy hitsitsy ny zandary amin’ izay manao fihetsika miendrika fanakorotanana. “Hatreto, efa misy anaran’ olona mihoatra ny 10 efa ampelatananay ka miandry fotoana hisamborana ireo olona ireo”, hoy ny zandary.